ရန်ကုန် ဗဟိုဘဏ်ရှေ့က ဆန္ဒပြပွဲ မြင်ကွင်း။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသ်ိမ်းယူထားမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ် မန္တလေး၊ နေပြည်တော် စတဲ့မြို့တွေမှာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့လည်း နိုင်ငံအနှံ့မြို့တွေမှာ ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
မြောင်းမြမြို့မှာတော့ ဒီနေ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေ ရှိပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်း အခုညအသံလွှင့်ခါနီးအချိန်မှာ လုံခြုံရေးက စပြီး အင်အားသုံးလူစုခွဲနေပါတယ်။ အခုထိအကြမ်းဖက်လူစုခွဲတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဟသာင်္တမြို့မှာလည်း ဖမ်းခံထားရတဲ့ ဆန္ဒပြကျောင်းသားကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေ ညပိုင်းအထိ စုဝေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သိရတာကတော့ တောင်းဆိုနေကြသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးကြား ထိပ်တိုက် တင်းမာနေပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် တခြား မြို့တော်တော်များများမှာတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ လှည့်လည် ချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေအပြင် ယာယီ ထိုင်သပိတ်ပုံစံဆန္ဒပြမှုတွေလည်း ပိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ရန်ကင်းမြို့နယ်ထဲက ဗဟိုဘဏ်ရှေ့မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဒီကနေ့ ယာယီထိုင်သပိတ်လုပ်ပြီး ဗဟိုဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေစတဲ့ ဝန်ထမ်းအများစုကလည်း နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေရှေ့ လှည့်လည်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ အရင်က ရန်ကုန်မြို့လည် ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြသူတွေ ဆုံရပ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာ စုသူ ပိုပြီးများပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာ ယာယီ ထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြမှုမှာ ပါဝင်သူဆရာဝန်တယောက်က ဘာကြောင့် ခုလို သံရုံးတွေဆီ လှည့်လည်သွားသလဲဆိုတာကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ခုလိုပြောပါတယ်။
"အများစုသွားကြတာကတော့ US သံရုံးရှေ့မှာ ပိုပြီးတော့ အများဆုံးပဲ။ US ကျတော့ ကိုယ်တွေကို support လုပ်မယ့် နိုင်ငံအနေနဲ့ သွားကြတာပေါ့နော်.... US သံရုံးကျတော့ ကတော့၊ နောက် ရုရှားရှိမယ်၊ တရုတ်သံရုံးဆိုလည်း အရမ်းများတယ်။ ကျမတို့ ပြောချင်တဲ့ message ကို information ရအောင်လို့ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လို စာတန်းလေးတွေကိုင်တယ်။ တချို့သံရုံးမှာဆိုရင်တော့ သူတို့ဘက်က ထွက်လာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။"
မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာ တရုတ်အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ မမှန်ကန်သလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေဟာ တရုတ်အစိုးရ လိုလားတဲ့ အခြေအနေမျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက တုံ့ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာသတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို တရုတ်သံအမတ်ကြီး Chen Hai က စာနဲ့ တုံ့ပြန်ဖြေကြားတာကို တရုတ်သံရုံးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေ တချို့မြို့တွေမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို တခြားမြို့တွေမှာ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာကြောင်း စိုးရိမ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်မလာတာမျိုး မလုပ်ကြဖို့ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကလည်း တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က အင်ဂျင်နီယာလူငယ်တယောက်က ပြောပါတယ်။
"ထပ်ပြီးတော့ ပါဝင်စေချင်တယ်။ လုံးဝအားမလျော့သွားစေချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမတို့ လူငယ်တွေ၊ ညီမတို့ ကျောင်းသားတွေ၊ ညီမတို့မှာ အနာဂတ်တွေရှိတယ်။ ညီမတို့ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကြီးမှာ လုံးဝအကျမခံနိုင်ဘူး။ ညီမတို့ ပါကို ပါဝင်သင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဘာမှ ထူးခြားတာမရှိရင်တောင် လုံးဝ ဘယ်သူမှကို အားမလျော့သွားစေချင်ဘူး။"
အနုပညာမြတ်နိုးတဲ့ လူငယ်တွေကလည်း စုစည်းပြီး သူတို့တတ်ကျွမ်းတဲ့ တူရိယာတွေ တီးခတ်ပြီး သူတို့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်ကို သီဆို ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ဂီတနဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ လူငယ်တွေထဲက တယောက်က သူတို့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သီးချင်းရဲ့ လေးနက်မှုကို ခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
"ညီမတို့ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ အရိုးရယ်၊ အသွေးရယ်၊ အသားရယ်က ဒီအာဏာရှင်တွေ ကျဆုံးဖို့ကို ညီမတို့ အခုချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်၊ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။"
ခုလိုအနာဂါတ်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြချိန်မှာပဲ နေပြည်တော်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဒီနေ့ Video conferencing လုပ်ပြီး ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈ နဲ့ တရားစွဲထားတယ်လို့ အရင်ကသိထားပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ နောက်ထပ် တစ်မှုတိုးပြီး တရားစွဲထားတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပြပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ပါ ထပ်ပြီးတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ နိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုတွေ တွေ့ရှိထားသလို၊ အချက်အလက်တွေလည်း ရရှိထားတယ်လို့ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်တာလုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုလည်း စစ်အာဏာပိုင်တွေဘက်က ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ် နောက်ထပ် စွဲချက်တင်မှုတွေ လုပ်လာမယ့် အလားအလာတွေလို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်း ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ တရားစွဲခံထားပါတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်လုံး ဖမ်းဆီးခံထားရတာ ဒီနေ့ဆို ၁၆ ရက်ရှိပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိ်ုင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သူ ၄၂၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိ်ုင်ငံမှာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မယ့် ဆိုင်ဘာဥပဒေသစ်တခု ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီဥပဒေအစား အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကို အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ပြင်ဆင်ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအမိန့်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီနေ့ ထပ်မံ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မဲစရင်းအမှားတွေကြောင့် မဲမသမာမှုတွေ ရှိနိုင်တာမို့ အာဏာလွှဲယူတာဖြစ်ကြီး ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကို ကျင်းပပြီး အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ စစ်တပ်ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဆိုသွားပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်း လုပ်ရပ်ဟာ စစ်တပ် ကိုင်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို သူတို့ဘာ့သာ ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြနေကြချိန်မှာ စစ်တပ် ပြောခွင့်ရကတော့ ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်တာလို့ ဒီနေ့ ထပ်ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲဟာ အရပ်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီး အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးကတည်းက ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။
စဈအာဏာသိမျးမှုဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွမှု ၁၁ ရကျမွောကျ
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးယူထားမှုအပျေါ ကနျ့ကှကျဆန်ဒပွမှုတှအေပျေါ မန်တလေး၊ နပွေညျတျော စတဲ့မွို့တှမှော အကွမျးဖကျ ဖွိုခှငျးဖမျးဆီးမှုတှေ ရှိခဲ့ပမေဲ့ ဒီနလေ့ညျး နိုငျငံအနှံ့မွို့တှမှော ဆကျပွီး ဆန်ဒပွနကွေပါတယျ။
မွောငျးမွမွို့မှာတော့ ဒီနေ့ ပဈခတျနှိမျနှငျးခဲ့မှုကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရသူတှေ ရှိပါတယျ။
မွဈကွီးနားမွို့မှာလညျး အခုညအသံလှငျ့ခါနီးအခြိနျမှာ လုံခွုံရေးက စပွီး အငျအားသုံးလူစုခှဲနပေါတယျ။ အခုထိအကွမျးဖကျလူစုခှဲတာတှေ ဖွဈနပေါတယျ။
ဟသာင်္တမွို့မှာလညျး ဖမျးခံထားရတဲ့ ဆန်ဒပွကြောငျးသားကို ပွနျလှတျပေးဖို့ ပွညျသူတှေ ညပိုငျးအထိ စုဝေးတောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ အခု နောကျဆုံးအခြိနျထိ သိရတာကတော့ တောငျးဆိုနကွေသူတှနေဲ့ လုံခွုံရေးကွား ထိပျတိုကျ တငျးမာနပေါတယျ။
ရနျကုနျမွို့အပါအဝငျ တခွား မွို့တျောတျောမြားမြားမှာတော့ ဆန်ဒပွမှုတှေ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးရှိခဲ့ပါတယျ။ ထူးခွားတာကတော့ လှညျ့လညျ ခြီတကျဆန်ဒပွမှုတှအေပွငျ ယာယီ ထိုငျသပိတျပုံစံဆန်ဒပွမှုတှလေညျး ပိုမွငျတှလေ့ာရပါတယျ။ ရနျကငျးမွို့နယျထဲက ဗဟိုဘဏျရှမှေ့ာ ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ ဆန်ဒပွသူတှေ ဒီကနေ့ ယာယီထိုငျသပိတျလုပျပွီး ဗဟိုဘဏျဝနျထမျးတှေ CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျဖို့ တောငျးဆို ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျနကွေတဲ့ ဆရာဝနျတှေ၊ ဆေးဝနျထမျးတှေ၊ အငျဂငျြနီယာတှစေတဲ့ ဝနျထမျးအမြားစုကလညျး နိုငျငံခွားသံရုံးတှရှေေ့ လှညျ့လညျဆန်ဒပွနကွေပါတယျ။ အရငျက ရနျကုနျမွို့လညျ ဆူးလမှော ဆန်ဒပွသူတှေ ဆုံရပျလို့ဖွဈခဲ့ပမေဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ အမရေိကနျသံရုံးရှမှေ့ာ စုသူ ပိုပွီးမြားပါတယျ။ အမရေိကနျသံရုံးရှမှေ့ာ ယာယီ ထိုငျသပိတျဆန်ဒပွမှုမှာ ပါဝငျသူဆရာဝနျတယောကျက ဘာကွောငျ့ ခုလို သံရုံးတှဆေီ လှညျ့လညျသှားသလဲဆိုတာကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးကို ခုလိုပွောပါတယျ။
"အမြားစုသှားကွတာကတော့ US သံရုံးရှမှေ့ာ ပိုပွီးတော့ အမြားဆုံးပဲ။ US ကတြော့ ကိုယျတှကေို support လုပျမယျ့ နိုငျငံအနနေဲ့ သှားကွတာပေါ့နျော.... US သံရုံးကတြော့ ကတော့၊ နောကျ ရုရှားရှိမယျ၊ တရုတျသံရုံးဆိုလညျး အရမျးမြားတယျ။ ကမြတို့ ပွောခငျြတဲ့ message ကို information ရအောငျလို့ ထုတျဖျောဆန်ဒပွတယျပေါ့။ အင်ျဂလိပျလို စာတနျးလေးတှကေိုငျတယျ။ တခြို့သံရုံးမှာဆိုရငျတော့ သူတို့ဘကျက ထှကျလာတှတေော့ရှိတယျပေါ့နျော။"
မွနျမာနိုငျငံက စဈအာဏာသိမျးမှုမှာ တရုတျအစိုးရ ပါဝငျပတျသကျနတေယျဆိုတာ မမှနျကနျသလို မွနျမာနိုငျငံအတှငျးက လကျရှိ နိုငျငံရေး အခွအေနတှေဟော တရုတျအစိုးရ လိုလားတဲ့ အခွအေနမြေိုး လုံးဝ မဟုတျပါဘူးလို့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီးက တုံ့ပွနျပါတယျ။ မွနျမာသတငျးမီဒီယာတခြို့ရဲ့ မေးမွနျးခကျြကို တရုတျသံအမတျကွီး Chen Hai က စာနဲ့ တုံ့ပွနျဖွကွေားတာကို တရုတျသံရုံးရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးမှုကို ကနျ့ကှကျ ဆနျ့ကငျြတဲ့ဆန်ဒပွသူတှအေပျေါ အကွမျးဖကျ ပဈခတျ ရိုကျနှကျဖမျးဆီးတာတှေ တခြို့မွို့တှမှော ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလို တခွားမွို့တှမှော အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးတာကွောငျး စိုးရိမျပွီး လမျးပျေါထှကျမလာတာမြိုး မလုပျကွဖို့ ဆန်ဒပွလူငယျတှကေလညျး တိုကျတှနျးနကွေပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အနာဂါတျအတှကျ ဆန်ဒထုတျဖျောဖို့ အရေးကွီးတယျလို့ ရနျကုနျမွို့က အငျဂငျြနီယာလူငယျတယောကျက ပွောပါတယျ။
"ထပျပွီးတော့ ပါဝငျစခေငျြတယျ။ လုံးဝအားမလြော့သှားစခေငျြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမတို့ လူငယျတှေ၊ ညီမတို့ ကြောငျးသားတှေ၊ ညီမတို့မှာ အနာဂတျတှရှေိတယျ။ ညီမတို့ စဈအာဏာရှငျလကျအောကျကွီးမှာ လုံးဝအကမြခံနိုငျဘူး။ ညီမတို့ ပါကို ပါဝငျသငျ့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာ ဘာမှ ထူးခွားတာမရှိရငျတောငျ လုံးဝ ဘယျသူမှကို အားမလြော့သှားစခေငျြဘူး။"
အနုပညာမွတျနိုးတဲ့ လူငယျတှကေလညျး စုစညျးပွီး သူတို့တတျကြှမျးတဲ့ တူရိယာတှေ တီးခတျပွီး သူတို့ရေးဖှဲ့ထားတဲ့ တျောလှနျရေးဆိုတဲ့ သီခငျြးသဈကို သီဆို ဆန်ဒပွကွပါတယျ။
ဂီတနဲ့ အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွနကွေတဲ့ လူငယျတှထေဲက တယောကျက သူတို့ ရေးစပျထားတဲ့ သီးခငျြးရဲ့ လေးနကျမှုကို ခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
"ညီမတို့ ဒီလူငယျတှရေဲ့ အရိုးရယျ၊ အသှေးရယျ၊ အသားရယျက ဒီအာဏာရှငျတှေ ကဆြုံးဖို့ကို ညီမတို့ အခုခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးကွိုးစားသှားမယျ၊ အကောငျးဆုံး ရပျတညျသှားမယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါ။"
ခုလိုအနာဂါတျအတှကျ နိုငျငံအနှံ့ ဆန်ဒပွတောငျးဆိုနကွေခြိနျမှာပဲ နပွေညျတျောမှာ ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ကို ဒီနေ့ Video conferencing လုပျပွီး ရုံးထုတျစဈဆေးပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ ပို့ကုနျ၊ သှငျးကုနျ ဥပဒပေုဒျမ ၈ နဲ့ တရားစှဲထားတယျလို့ အရငျကသိထားပမေဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ နောကျထပျ တဈမှုတိုးပွီး တရားစှဲထားတယျလို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒအေကြိုးဆောငျ ရှနေ့ကွေီး ဦးခငျမောငျဇျောက ပွောပွပါတယျ။ သဘာဝဘေးအန်တရာယျစီမံမှုဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ပါ ထပျပွီးတရားစှဲထားတာဖွဈပါတယျ။
နပွေညျတျောမှာလုပျတဲ့ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီကလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာတော့ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးကနေ နိုငျငံခွားငှစေီးဆငျးမှုတှေ တှရှေိ့ထားသလို၊ အခကျြအလကျတှလေညျး ရရှိထားတယျလို့ ဗိုလျမှုးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောကွားထားပါတယျ။ အသေးစိတျကို ရှငျးလငျးထုတျပွနျတာလုပျမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျး တာဝနျရှိသူတခြို့ကိုလညျး စဈအာဏာပိုငျတှဘေကျက ချေါယူမေးမွနျးမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဒါဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ တာဝနျရှိသူတှအေပျေါ နောကျထပျ စှဲခကျြတငျမှုတှေ လုပျလာမယျ့ အလားအလာတှလေို့ မွငျနိုငျပါတယျ။
ဆကျလကျဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ကိုလညျး ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ တရားစှဲခံထားပါတယျ။ သူတို့ ၂ ယောကျလုံး ဖမျးဆီးခံထားရတာ ဒီနဆေို့ ၁၆ ရကျရှိပါပွီ။ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ အာဏာသိမျးယူပွီးတဲ့နောကျပျိုငျး စဈအာဏာသိမျးမှု ဆနျ့ကငျြသူ ၄၂၀ ကြျော ဖမျးဆီးခံထားရတယျလို့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးအသငျးက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အငျတာနကျ အှနျလိုငျးဆကျသှယျမှုကို ထိနျးခြုပျကနျ့သတျမယျ့ ဆိုငျဘာဥပဒသေဈတခု ထုတျပွနျမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက ထှကျခဲ့ပမေဲ့ အဲဒီဥပဒအေစား အီလကျထရောနဈဆကျသှယျဆောငျရှကျရေးဥပဒကေို ပွငျဆငျတဲ့ ဥပဒကေို အာဏာသိမျးယူထားတဲ့ စဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီက ပွငျဆငျပွဌာနျးလိုကျပါတယျ။ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးအမိနျ့နဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၅ ရကျနေ့ နစှေဲ့နဲ့ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အာဏာသိမျးယူထားတဲ့ စဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီကတော့ စဈတပျက အာဏာသိမျးတာ မဟုတျဘူးလို့ ဒီနေ့ ထပျမံ ပွောခဲ့ပါတယျ။ မဲစရငျးအမှားတှကွေောငျ့ မဲမသမာမှုတှေ ရှိနိုငျတာမို့ အာဏာလှဲယူတာဖွဈကွီး ရှေးကောကျပှဲသဈကို ကငျြးပပွီး အနိုငျရပါတီကို အာဏာလှဲပေးမယျလို့ စဈတပျပွောခှငျ့ရ ဗိုလျမှုးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ဒီနေ့ နပွေညျတျောမှာ လုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဆိုသှားပါတယျ။ စဈတပျရဲ့ အာဏာသိမျး လုပျရပျဟာ စဈတပျ ကိုငျတိုငျ စိတျတိုငျးကြ ရေးဆှဲထားတဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံကို သူတို့ဘာ့သာ ခြိုးဖောကျတာဖွဈတယျလို့ ထောကျပွနကွေခြိနျမှာ စဈတပျ ပွောခှငျ့ရကတော့ ဥပဒနေဲ့အညီ လုပျဆောငျတာလို့ ဒီနေ့ ထပျပွောပါတယျ။ ဒီနေ့ နပွေညျတျောမှာလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးပှဲဟာ အရပျသားအစိုးရခေါငျးဆောငျတှကေို ဖမျးဆီး အာဏာသိမျးခဲ့ပွီးကတညျးက ပထမဆုံးလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးပှဲဖွဈပါတယျ။